Qiiqa Dabka Kaynta | Puget Sound Clean Air Agency, WA
Qiiqa Dabka Kaynta
Dabka kayntu waxa uu badanaa yimaadaa inta lagu jiro bilaha xagaaga ee diiran, ee qalalan. Maadaama oo cimilada is badalaysaa ay kasoo dartay, waxaanu filanaynsaa in dab badan oo kaynta ahi dhaco oo qiiq badan oo dabka kaynta ah soo gaadho deegaanka Puget Sound.
Qiiqa dabka kayntu waxa uu leeyahay khatar caafimaad oo lamid ah ka qiiqa xaabada, laakiin aad ayuu uga badan yahay. Qiiqa waxaa ka buuxa qurubyo yaryar, kuwaas oo sidoo kale khatar ku noqon kara kooxaha nugul - caruurta, dadka waawayn, iyo dadka uurka leh, kuwa wadne ama sanbab xanuunka qaba (sida xiiqda ama COPD), ama uu ku dhacay faalig, waa inay ka taxadiraan.
In kasta oo ay adag tahay in la saadaaliyo in uu sanadkan dhacayo qiiqa dabka kayntu, laakiin waad u diyaar garoobi kartaa.
Waxaad U Diyaar Garawdaa Qiiqa Dabka Kaynta:
Waxaad kala hadashaa dhakhtarkaaga ama xirfadlaha caafimaadka marka hore si aad u samayso qorshe qoyskaaga ah kahor inta aanay saamaynin qiiqa dabka kayntu ee tayada hawadeenu.
Marka hawadu u eekaato ama u urto qiiq ahaan, waxaa laga yaabaa inaanay aheyn waqtiga ugu wanaagsan ee hawlaha banaanka loo baxo. Waxaad isticmaashaa caqligaaga.
Waxaad si joogto ah ula socotaa saadaasha tayada hawada adiga oo isticmaalaya la socodka hawsha ee boga hore ama adiga oo eegaya la socodka wasakhda hawada ee kuugu dhaw.
Hadii uu gurigu kugu kululaado ama aad si gaar ah ugu nuqushahay qiiqa, waxaa wanaagsan inaad meel kale hoy ka doonato.
Waxaad la joogtaa asxaab ama qoys aanu saamaynin qiiqo.
Waxaad qabataa dhisme wayn oo dadka iskugu yimaadaan oo leh eer koondhiishin iyo filtarka hawada oo wanaagsan si aad qiiqa uga bogsato, sida “xarun qaboojiye” (macluumaad dheeraad ah hoos ayaa laga heleyaa).
Si aad u xadido wakhtiga aad banaanka joogto, waxaad kaydsataa waxyeeba daruuriga ah sida cuntada, dawooyinka, iyo shayada kale ee aad ugu baahan tahay qoyskaaga.
Filtar aadka wax ku oolka u ah ee HEPA ee hawada lagu nadiifiyo ama nidaamka HVAC ayaa kaa caawin kara nadiifinta hawada guriga gudihiisa.
Waxaad sidoo kale samayn kartaa marooxad filter ah si ay hawada guriga dhaxdiisa kuugu nafiidiso. Kaliya waxaad u baahan tahay marooxad saxaarad ku jirta, filtarka farnase (MERV-13 ama dhaama), iyo xadhig ama xabag. Tilmaamaha talaabo talaabada ah halkan ayay ku yaalaan.
Waxaad u astaysaa qol gurigaaga ah “qol nadiif ah”. Qolkan ilaa inta macquulka ah albaabadiisa ama daaqadihiisu ka yaraadaan, ama waa in la xidhaa, si qiiqu aanu usoo gelin. Waxaad adeegsataa nadiifiyaha hawada ee guriga dhaxdiisa ama marooxa filterka ah si aad qolka u nadiifiso. Macluumaad dheeraad ah halkan ka ogow.
Hadii aad leedahay eer koondhiishin, waxaad xidhaa meesha ay hawada cusub ka galayso hadii uu leeyahay si aanay hawada qiiqa lehi guriga usoo gelin.
Waxaad barataa meesha “xarunta qaboojiyaha” ugu dhaw uu ku yaal. Xarumaha qaboojinta, sida maktabadaha ama xarumaha bulshada, waxay noqon karaan meel wanaagsan oo looga hortago qiiqa hawada.
Waji gashadka leh calaamada “N95” ama “N100” waxa uu kaa caawin karaa in uu wasakhsa hawada kaa ilaaliyo, laakiin cid walba wax uma taraan. Waa in ikhtiyaarka ugu danbeeya ee la isticmaalo ay noqdaan. Fadlan waydii dhakhtarkaaga si aad u aragto hadii ay tani adiga munaasab kugu tahay. Wixii macluumaad dheeraad ah halkan ayaa laga heleyaa
Sidee ayaan isku duwaan gelin karaa digniinta tayada hawada?
Waxaa jira dhawr dariiqo oo aad isku duwaan gelin karto macluumaadka ugu danbeeya ee saamaynaya qiiqa dabka kaynta ee tayada hawada ee deegaankeena.
Fariin Qoraal ah Oo Digniin ah:
U qor WILDFIRES (DABABKA KAYNTA) oo fariin qoraal ah 313131
Waxaad is duwaan gelisaa liiska iimeeladeena
Sidee ayuu qiiqa iyo danbasku u saamayn karaa caafimaadkayga?
Cabirka qurubyada wasakhda ah, oo loo yaqaan shay (particulate matter) ama PM, waxa uu toos ula xidhiidhaa in uu keeni karo mushkilado caafimaadka ah. PM waxaa lagu cabiraa mikromitir (µm)
Marka ay dhacdo dhacdo qiiqa dabka kaynta ah, waxaa jiri kara qurubyo kala duwan oo hawada a socda. PM yada waawayn sida danbaska (PM leh cabir kawayn 10µm) waxaa lagu arki karaa indhaha waxaanu noqon karaa mid walaac leh, laakiin jidhkeenu waxa uu leeyahay difaac dabiici ah oo waxyaabaha waawayn uu iskaga difaaco inayna gelin sanbabkeena, in kasta oo ay indhaha, sanka iyo cunuhu ina cun cuni karaan.
Qurubyada kale ee xaabada, ama qiiqa dabka kaynta, waxa ay noqon karaan kuwa aad u yaryar (PM cabir ah 2.5µm ma kayar, 2.5µm, ilaa 3% oo timaha bilaa aadanka ah) waxayna aad khatar ugu yihiin caafimaadkeena. Qurubyadan yaryar laguma arki karo indhaha waxaanu jiidan kara meesha ugu fog ee sanbabkeena. Halkaan qurubyadani waxay ku keeni karaa mushkilad caafimaad oo waawayn, sida mushkilado neefsiga iyo wadnaha ah.